Sary fanindriana- Ampidino jpg maro an-tserasera / ivelan'ny Internet
Compressor de Advanced Image
Manatsara ny haben'ny sary sy ny kalitaon'ny sary ivelan'ny Internet sy ny Internet amin'ny alàlan'ny compresseur sary jpg mandroso.
*Afaka manampy sary 10 ianao hanery.
Ahoana ny famoretana ny sary?
Tsindrio Add File raha te hanampy rakitra. Afaka manampy rakitra tsy voafetra ianao.
Kitiho ny Start Compress hanombohana ny algorithm compression hampihenana ny haben'ny sary nakarina. Kitiho ny hanafoanana.
Tsindrio Sintomy raha te-hisintona ny jpeg voahidy / PNG voahidy na sary na sary voahidy.
Azonao atao ny mametaka JPG, GIF, PNG miaraka amin'ny kalitao tsara indrindra. Ahenao ny haben'ny JPG, GIF, ary PNG amin'ny toerana iray.
Ahoana ny fiasan'ny famatrarana sary?
Ny sary finday avoakanao dia mitaky habaka fitehirizana be loatra. Ity ny fomba ahafahantsika manamaivana azy ireo.
Ity fampiharana ity dia mampihena ny haben'ny sary amin'ny famakafakana ny pixel tsirairay. Miaraka amin'ny fitsapana ataonay, ny fihenan'ny haben'ny rakitra avy amin'ny sary mahazatra dia nijanona teo anelanelan'ny 20% sy 85%. Ny compresseur sary dia programa handefasana sy hamerenana ireo sary nomerika, ary koa hikarakarana manokana ireo sary dizitalinao mba hiarovana ny kalitaon'ny sarinao tena izy. Ny compressors dia misy maotera sy teknolojia mamolavola sary mandroso namboarina.
Ity misy ohatra iray momba ny fomba ahafahan'ny fampiharana mamela anao hampihena ny haben'ny sary.
Ity dia ohatra fotsiny sary hanehoana aminao ny haben'ny fanatsarana ny sarinao.
sary dia ny fampiharana an-tranonkala voalohany ivelan'ny tranonkala.
mametaka sary an-tserasera sy ivelan'ny Internet dia rindrambaiko fanamafisana sary maivana sy mahery. Ny fampiharana dia hamela anao hametaka sary ho sary kely kokoa tsy misy kalitao na hampiasa famatrarana lossy. Azonao atao ny mametraka ny rindranasa amin'ny fitaovanao sy mampiasa azy amin'ny Internet. Azonao atao ny mametraka ity rindranasa ity amin'ny fitaovana Windows / Android / Apple / Linux. Ity fampiharana ity dia fampiharana maimaim-poana izay tsy mila mandoa karazana sarany. Ny fanamafisana ny sarinao amin'ny alàlanay dia ny fomba tsotra hiantohana ny sarinao ho maivana, entana haingana ary vonona amin'ny famokarana. Ahoana ny famoretana ny sary rehetra amin'ny fampisehoana PowerPoint. Ny rindran-damina fanodinana sary dia afaka manampy anao hanova ny compresseur rakitra jpg an-tserasera na hamerenana ny haben'ny sary na hampihena ny haben'ny jpg.
Maherin'ny iray tapitrisa ny fisintomana, ny fampiharana compression dia iray amin'ireo rindrambaiko fanatsarana sary malaza indrindra hita amin'ny Internet na amin'ny Internet. Manampy ny mpaka sary an-tapitrisany, bilaogera, webmaster, orinasa, na mpampiasa tsotra izahay amin'ny fitehirizana, fandefasana ary fizarana sary nomerika. Ny fampiharana dia mamaky sy mamerina mandahatra sary am-pahombiazana kokoa ny sary, mamela azy hanatsara ny rakitra sary nefa tsy manova ny famahana na ny fatiantoka kalitao. Miezaka mampiasa AI amin'ny fihenan'ny haben'ny sary izahay, toy ny amin'ny Silicon Valley an'ny HBO. Ity fampiharana ity dia hahatonga ny sarinao ho mavesatra entana amin'ny fifandraisana Internet miadana.